CEEB MAHAN IN NAAGTAADA DHABARKA SALIID U MARISID KAHOR GALMADA SIDAAN | shumis.net
Home » galmada » CEEB MAHAN IN NAAGTAADA DHABARKA SALIID U MARISID KAHOR GALMADA SIDAAN
CEEB MAHAN IN NAAGTAADA DHABARKA SALIID U MARISID KAHOR GALMADA SIDAAN
Xanuunka dhinaca hoose ee dhabarka, waxaa ku xanuunsada 4 ilaa shan qofood intii ah waqtiga ee noloshooda. Inta badan waxuu xanuunka ku dhammaadaa dhowr maalmo ah ilaa iyo dhoor toddobaadyo ah, laakin mar marka qaarkood waxuu qaadan karaa waqti dheer
waana soo noqonoqdaa.
Waxuu xanuunka dhabarka u imaan karaa si degdeg ah waxuuna ahaan karaa mid aad u xun (darran) ama waxuu u imaan karaa xoogaa-xooga intii waqti ah waxuuna keeni karaa dhibaatooyin waqti dheer ( joogto ah ).
Dhinaca hoose ee dhabarka, waxuu ka samaysan yahay 5 xaroor ee loo yaqaan sida L1 to L5. Waxuu gobolkaan sidaa culayska oo dhan ee
dhinaca kore ee jirka (ee lagu daray culayska dheeriga ah ee uu sido) waxuuna yahay mid ku jiro hawl aan kala go’ lahayn gaar ahaan markii la rogmanaayo, la jeedjeedinaayo iyo markii wax la qaadaayo.
Waxuu dhismaha isku jiro ee dhinaca hoose dhabarka la micno yahay haddii wax yar oo dhaawac ah gaaro wax kasto ka mid ah dhismaha dhabarka inuu keeni karo xanuun aad u badan iyo raaxo la’aan. Xanuunka dhinaca hoose ee dhabarka waa astaanta inuu jiro murugo u keentay dhaawac xirgaha, murqaha, xirgaha fiibarka ama saxuunta (discs).
Inta badan dhabarka isagaa is-raysiiyo laakin haddii aad u darran yahay uuna yahay joogto waxaa laga maarmaan ah in la doonto talada caafimaadka si loo ogaado si sax ah loona helo daawayn ku habboon.
Inta badan dhabar xanuunka hooseeyo waxaa loogu yeeraay sida ‘ mid aan lahayn meel gaar u ah’ sababta oo ah inuu keenay dhaawac ama cudur aan aad u darnayn, laakin ay keeneen laabniin, murqaha oo aadkaadaan, dhaawacyo yar-yar ama jirka oo meel qabsaday ama dhimirka ay wax yar gaaray. Waxaa kale uu ku dhici karaa markii uu jiro uur, ama sabab murugo leh, bukasho, bukashada kilyaha ama hurdo xumi.
Waxaa dhabar xanuunka keeni karo waxqabadyo maalimeedka: si xun u fooraarsi, wax qaadis, wax dhaqdhaqaajin, qunfacid, hindhisid, murqaha oo isgalaan, jirka oo isgalo ama wadidda gaariga oo waqti dheer qaadato iyada oo marna la joojin. Shilalka guriga, shaqada, ama markii la wado gaariga ( oo ku jiro dhaawaca qoorta ) waxayna yahiin sababaha guud.
Qaabka ugu caansan ee dhabar xanuunka darran waxaa keeno bararka ama murqacashada mid ama ka badan ee saxuunta ku dhex jirto xaroorka oo keenayo in maaddada qoyan (nucleus pulposus) u riixaan dhinaca xirigga xaroorka ama xididdaha dhimirka ee u cararo saxab xigeenka.
Waxaa sidaan loo yaqaanaa caadi ahaan sida saxanka ‘ saxanka taranturooday’ laakin waxaa si aad ah oo sax ah loo tilmaamaa inuu
yahay sida ‘ horay u fakaday’ (bararid ) ama ‘ herniated’ ( murqacday); dhusha saxanka ayaa wax ka soo da’aayo intii oo waxa soo soconaayo ayaa keenaayo dhabar xanuunka
laakin xitaa xanuunka maskaha, cajiraha iyo lugta oo sababtuna tahay carada dhimirka xagga dambe ee jirka.
Sida caadiga ah saxanka wuu gurmaa waxuuna la qayirmaa da’da. Ama waxuu daba socdaa dhaawaca. Waxuuna sidaa ku keenayaa inay saxuunta ay yareeyaan tanaasulka, ay waxtar yar u yeeshaan inay jiifiyaan xaroorka, sidaasi darteedna inay guud ahaan keenaan adeeg
iyo xanuun, gaar ahaan aroorta hore una keenaan wayeelka lafo xanuun (markuu ku dhaco osteoporosis).
Waxaa keeno dhabar xanuunka hoose xitaa tiro kale oo xaalado ah sida xaroorka oo dhasho isaga oo xun, cudurada lafaha, burooyinka, cudurada holacsan ee qaska (PIDs), waxyaabo xun ee lagu dhasho, iyo kaadi-galeenka.
Title: CEEB MAHAN IN NAAGTAADA DHABARKA SALIID U MARISID KAHOR GALMADA SIDAAN
Posted by Unknown, Published at August 05, 2016 and have 0 comments